Mitohy ny fihibohana faran’ny herinandro: miverina mianatra ireo hanala fanadinana | NewsMada
Par Taratra sur 03/05/2021
Mitohy ny fihibohana amin’ny faran’ny herinandro ho an’Analamanga. Nakatona kosa ny faritra hafa ary miverina miditra an-tsekoly ireo mpianatra hanala fanadinana, manomboka izao, araka ny fepetra nambaran’ny filoha Rajoelina Andry, omaly.
Nambaran’ny filoham-pirenena fa anisan’ny fepetra noraisina amin’izao fidirana amin’ny telovolana fahatelo izao ny hiverenan’ny mpianatra an-tsekoly. “Mianatra ireo kilasim-panadinana hiatrika ny CEPE sy ny BEPC ary ny bakaloera”, hoy izy. Na izany aza, mbola mikatona ary tsy tsy mbola mianatra kosa ny mpianatra kilasy hafa ankoatra ireo.
Ny faritra tsy mikatona kosa, miverina mianatra avokoa, saingy anaty fanajana fepetra. Tahaka izany koa ny oniversite ho an’ny faritra tsy mikatona, miverina mianatra.
Araka izany, hakatona mihiboka manomboka ny alarobia 5 mey izao ny faritra Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Anosy noho ny firongatry ny valanaretina.
Nisy kosa anefa ireo faritra niezaka ka misokatra manomboka ny 3 mey izao ka anisan’izany ny any Boeny sy i Nosy Be. “Maro ireo sitrana ary tsy misy olona mitondra ny covid-19 intsony any amin’ireo faritra ireo”, hoy ny filoha.
Nampitandrina anefa ny tenany fa entanina hatrany hanaja fepetra ny rehetra na nihena aza ny tranga vaovao.
Voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50
Mbola mitohy kosa ny “couvre feu” ho an’ny faritra mikatona ary mihiboka hatrany koa ny faran’ny herinandro ny eto Analamanga. Mikatona ny “bar”, ny “espace”, “karaoké”. Ny “resto” misokatra saingy ho an’ny antsasany ihany. Mbola mitohy ny fikatonan’ny fiangonana sy ny “mosqué” ary omena alalana amin’ny RNM/TVM handefa fandaharana izy ireo.
Napetraka koa ny fandaminana ny fampeherazana am-bavaka atao amin’ny marary eny anivon’ny CTC ka anjaran’ny tompon’andraikitra ny mandamina izany. “Tsy afaka mijanona mihoatra ny 30mn amin’ny efitra iray ary tsy mihoatra ny olona roa ny mpitondra am-bavaka ary omena fitaovana “EPI” izy ireo”, hoy izy.
Etsy andaniny, misokatra ny “épicerie”, manomboka amin’ny 6 ora maraina ary ny olona iray ihany mivoaka miantsena. Tanterahina amin’ny andron’ny fahafatesany ny fandevanana ireo lavon’ny covid-19 ary tsy mihoatra ny olona 10 ireo mpandevina. Tsy miasa ireo marefo ara-pahasalamana ary ny antsasany ihany ny mpiasa miasa ho an’ireo orinasa mampiasa olona mihoatra ny 500. Voarara kosa ny famoriam-bahoaka mihoatra ny olona 50. Nampitandrina kosa ny filoha fa misy manararaotra amin’ny lafiny rehetra ka tsy tokony hisy fandrodanana trano amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Mikatona tanteraka ny sidina anatiny
Anisan’ny fepetra noraisina koa ny fanakatonana tanteraka ny sidina anatiny, tanterahin’ny Tsaradia manerana ny Nosy, manombola ny 5 mey izao. Mbola mikatona ny sisin-tany. Anisan’izany ny sambo sy ny fiaranamidina. Mbola mikatona tahaka izany koa ny zotra nasionaly ary malalaka ny fitaterana vokatra ary tsy tokony hisy sakantsakana. “Tsy misy tokony hiditra eto intsony ny sidina… Efa nisy fanapahana noraisina. Nisy ny tranga manokana tsy azo nialana noho ny maha olombelona ka nandraisana fanapahan-kevitra manokana tamin’ny fahatongavan’ny sidina farany teo”, hoy izy. Nanambara ny minisitry ny Fitaterana, Randriamandranto Joel fa malalaka, afaka mivoaka any ivelany ny mpanao fantanjahantena hiatrika ny fifaninana iraisam-pirenena.
Ho tonga amin’ny 7 mey ny vaksiny
Ankoatra izany, nambaran’ny minisitry ny Fahasalamana, ny Pr Rakotovao Hanitrala fa ho avy ny 7 mey ho avy izao ny vaksiny, andiany voalohany. Anisan’ny hisitraka izany ny mpiasan’ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, ny marefo sy zokiolona. “Efa misy drafitra matipaika ny momba ny vaksiny ka efa misy ny lamina amin’ny alalan’ny fisoratana anarana eny anivon’ny tobim-pahasalamana. Efa vonona ny kara baksiny hamarinana ny fahavitana izany”, hoy izy. Nanamafy ny filoha fa manana “Concentrateur d’oxygene” miisa 2 400 nanavotana aina olona maro isika, nampiasaina ary mbola nanafatra 2 000 ka efa tonga ny herinandro teo izany.
Mbola hanafatra “scanner” ho an’ny any Taolagnaro sy i Nosy Be ary Antalaha koa ny fanjakana.
Etsy andaniny, hampitomboana ny toerana handraisana marary ka hanokafana ny CTC hanampy ny hopitaly eto Analamanga. Hanampy izany ny eny Andoharanofotsy eny amin-dry masera eny Mandriamena. Eo koa ny eny Panorama sy ny CTC telo hafa any Antsirabe sy Fianar ary Taolagnaro.
Hitohy ny fanaraha-maso ny vidin’ny entana (PPN)
Nanambara kosa ny ministry ny Varotra, Rakotomalala Lantosoa, manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana, indrindra fa ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandrio fa mitohy ny hetsika fanaraha-maso ny vidin’entana. “Horaisina ny fepetra amin’ireo mpitatitra, mpijirika, mpivarotra ary efa misy paikady hametrahana izany eny an tsena. Harahi-maso manomboka anio izany”, hoy izy.
Fisorohana ny fanohintohinana ny firaisam-pirenena
Nitondra fanazavana momba ny fampiatoana ny fandaharana amin’ny haino aman-jery kosa ny minisitry ny Serasera, Lalatiana Andriantongarivo ka nambarany fa noraisina izany ary azo atao ho fisorohana ny mety ho fanohintohinana ny firaisam-pirenena na koa ny adim-poko…”Tanjona ny tsy hitantanana krizy anaty krizy, toy ny nitranga tany Roanda niteraka vonolona… Tsy ilaina korontana amin’ny fotoan’ny ady tahaka izao. Tsy manana eritreritra hanohintohinana ny asa fanaovan-gazety ny fanjakana”, hoy izy. Nanterin’ny filoha fa tsy azo ekena ny famoahana vaovao mampisavrovo saim-bahoaka. “Demokrasia tsy midika gaboraraka na hikomy. Famoahana vaovao anaty fifanajana hizorana any amin’ny demokrasia no tokony hatao”, hoy izy.